Corso di birmano > italiano| Hotel | Traduzione
Corso birmano - Hotel
L'hotel ဟိုတယ် - ho tai
Appartamento တိုက်ခန်း - taikʔ kaN
Benvenuti! ကြိုဆိုပါတယ် - kyo sho pa tai
Ha una camera libera? အခန်းလွတ်ရှိပါသလား ခင်ဗျာ / ရှင် - ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
È una camera con bagno? ရေချိုးခန်းပါလား - yé chō kaN pa lā
Preferisce due letti separati? တစ်ယောက်အိပ်ကုတင် နှစ်လုံး လိုချင်ပါသလား - thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
Desidera una camera doppia? နှစ်ယောက်အိပ် အခန်းယူချင်ပါသလား - hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone ရေချိုးကန်ပါတဲ့အခန်း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန်း/ ရေချိုးခန်းပါတဲ့အခန်း - yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
Camera con la prima colazione မနက်စာပါတဲ့အခန်း - ma netɁ sa pa téi ah kaN
Qual è il prezzo per una notte? တစ်ညဘယ်လောက်ကျလဲ - titʔ nya bet laukɁ kya lé
Prima vorrei vedere la camera, per favore! အခန်းကိုအရင်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ - ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
Sì, certo! ဟုတ်ကဲ့၊ ရပါတယ် - hokʔ ké' , ya pa tai
Grazie, la camera va benissimo. အခန်းကတော်တော်ကောင်းပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါဘဲ - ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
Va bene, posso prenotare per questa sera? ကောင်းပါပြီ၊ ဒီနေ့ညအတွက် အခန်းယူလို့ရမလား - kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
La ringrazio, ma è troppo cara per me နေပါစေတော့၊ ကျနော့် အတွက်တော့ဈေးနည်းနည်းကြီးနေတယ်။ - nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
Puo' prendere i miei bagagli, per favore? ကျနော့် ပစ္စည်းတွေသယ်လာပေးနိုင်မလား - kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
Dove si trova la mia camera, per favore? ကျနော့် အခန်းဘယ်မှာ ပါလဲ - kya nau ah kaN bai mha pa lé
È al primo piano နှစ်လွှာမှာပါ - hnit lewo mha pa
C'è un ascensore? ဓါတ်လှေခါး ရှိလား - datʔ lhé khā shiɁ lā
L'ascensore è alla sua sinistra ဓါတ်လှေခါး ဘယ်ဖက်မှာရှိပါတယ် - datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
L'ascensore è alla sua destra ဓါတ်လှေခါး ညာဖက်မှာရှိပါတယ် - datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
Dov'è la lavanderia? ပင်းမင်းခန်းဘယ်မှာရှိပါသလဲ - hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
È al pianterreno. မြေညီထပ် မှာပါ။ - myé nyi tatɁ mha pa
Pianterreno. မြေညီထပ် - myé nyi tatɁ
Camera အခန်း - ah kaN
Lavanderia ပင်းမင်းဆိုင် - piN miN saiN
Parrucchiere ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်။ - saN piN nyut saiN
Parcheggio auto ကားပါကင်။ - kā pa kiN
Vediamoci nella sala conferenze? အစည်းအဝေးခန်းဘယ်မှာလဲ။ - ah sī ah wai kaN bai mha lé
La sala di riunione အစည်းအဝေးခန်း - ah sī ah wai kaN
La piscina è riscaldata ရေနွေးတဲ့ ရေကူးကန် - yé nawai téi yé kū kaN
La piscina ရေကူးကန် - yé kū kaN
Mi svegli alle sette per favore မနက် ခုနှစ်နာရီမှာ နှိုးပေးပါ - ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
La chiave per favore ကျေးဇူးပြုပီး သော့ပေးပါ။ - ké zū pyu pi thauʔ pé pa
Il pass per favore ကျေးဇူးပြုပီး ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ပေးပါ။ - ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
Ci sono messaggi per me? ကျနော့် အတွက် ဘာသတင်းပေးထားတာရှိပါလဲ - kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
Sì, eccoli ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာပါ - hokʔ ké' , di mha pa
No, non ha ricevuto nulla ရှင့်အတွက် ဘာမှမရှိပါဘူး - shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? အကြွေဘယ်မှာလဲလို့ရမလဲ - ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? ပိုက်ဆံ အကြွေလဲပေးပါ ခင်ဗျာ - paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? ရပါတယ်၊ ဘယ်လောက်လဲချင်ပါသလဲ - ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé